Kulamo Looga Hadlayo Dhameystirka Maamulka Hirshabella Oo Ka Socda Jowhar – Goobjoog News
Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabellaha Dhexe waxaa ka soconaya kulamo kala duwan oo looga arrinsanayo dhameystirka maamulka Hirshabelle.
Xubno ka socda dowladda Federaalka, IGAD, waxgarad iyo xildhibaannada Hirshabelle ayaa kulamadaasi siyaabo kala duwan u qaadanaya, waxayna ay ka shirayaan sidii loo dardar gelin lahaa dhameystirka maamulkan cusub.
Shalay waxaa magaalada Jowhar lagu dhaariyey xildhibaannada cusub ee baarlamaanka maamulka Hirshabelle, waxay dooran doonaan guddoomiye Baarlamaank iyo ku xigeennadiisa, sidoo kalena waxay dooran doonaan madaxweyne.
Sida qorshaha uu yahay 15-ka bishan ayaa la doonayaa in maamulka Hirshabelle yeesho madaxweyne, sidaasina waxaa ku dhameystirmaya hannaanka maamul goboleedyada ee dalka.
Maamulka Hirshabelle waxaa kasoo horjeeda beelaha dega gobolka Hiiraan qaarkood, kuwaasi oo sheegaya iney u arkaan maamulkaan mid dhismahiisa loo maray waddo qaldan.
Goodax Barre Oo Noqday Xildhibaan
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo la Kulmay Madaxweynayaashii Hore Ee Dalka
Jyevhf tioedz Generic cialis where to buy cialis online
Ozlswr sifywg Order viagra usa cialis pills
Nayfct mgboof Viagra next day canadian pharmacy online
Okmeri hcbwjx generic viagra online best online pharmacy
Xxpkfb rvrsto online canadian pharmacy Tsroh
get assignments done online - assignments for sale affordabl...
help writing a paper for college - http://payxessays.com/ my...